Isgaarsiinta Voice – Category – Windows – Vessoft
Isgaarsiinta Voice – Windows
Isgaarsiinta Voice Webcams The software ugu caansan inay isgaadhsiin la yeeshaan saaxiibo oo caalamka ah. Software wuxuu hubinayaa tayo sare leh ee xidhiidhka codka iyo muuqaalka ah, iyo sidoo kale is dhaafsadeen haboon ee fariimaha qoraalka ah.
Isgaarsiinta Voice Webcams Software si ay u sameeyaan cod ama video baaqyo iyo soo diro fariimo qoraal ah. Waxaa jira ah .Wadashaqayntaas xiriir toos ah qalab isticmaalaha.
Isgaarsiinta Voice Webcams Tool si ay ula xiriiraan dadka isticmaala oo dunida ah. Software ayaa kuu ogolaanaya in aad u sameyso wicitaano cod iyo xiriiro hab ka mid ah muuqaal.
Isgaarsiinta Voice Webcams Tool isgaarsiinta u dhexeeya dadka isticmaala adduunka oo dhan. Software ayaa kuu ogolaanaya in aad u sameyso wicitaano cod, wicitaanada video iyo farriimo sarrifka qoraalka.
Isgaarsiinta Voice Webcams Agabka in la sameeyo cod iyo video ku baaqay in adduunka oo dhan. Barnaamijku wuxuu kuu ogolaanayaa inaad si ay u sameeyaan wicitaanada u diro telefoonnada gacanta iyo taleefannada guryaha.
Isgaarsiinta Voice Chat Webcams Tool qoraalka, codka iyo video fariimaha. Software The kuu ogolaanayaa inaad si ay u wadaagaan faylasha iyo dar dadka isticmaala in ay xiriirada aad ka codsiyada kale.
Isgaarsiinta Voice Chat Software ayaa doonaya in uu codkiisa iyo isgaarsiinta iyadoo dadka kale ee qoraalka. Software ayaa awood u dhigay si sir ah u helaan lagu sheekeysto iyo reserved sanduuqa hadal baahida user ah.
العربية, English, Français, Español... PrivalSystems 77.01